merolagani - फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको खुद नाफामा सामान्य सुधार
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको खुद नाफामा सामान्य सुधार
Jul 19, 2021 06:35 AM Merolagani
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड(FMDBL) ले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ। विवरण अनुसार माइक्रोफाइनान्सको अधिकांश सूचकमा सामान्य सुधार देखिएको छ।
अघिल्लो आथिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा लघुवित्तको खुद नाफा १.२९ प्रतिशत बढेको छ। खुद ब्याज आम्दानी बढेपनि सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी रकम छुट्याएका कारण लघुवित्तको खुद नाफा प्रभावित भएको हो।
समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी १८.१० प्रतिशत बढेको छ भने सञ्चालन मुनाफा ३.२९ प्रतिशत मात्र बढेको छ।
त्यसैगरी, लघुवित्तको चुक्ता पूँजीमा कुनै परिवर्तन भएको छैन भने जगेडा कोष १०२.५२ प्रतिशत बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लघुवित्तले ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सापटीबाट ८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ।
चैत मसान्तसम्ममा लघुवित्तको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी १६ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १३१ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ।
हालै आइपीओ निष्काशन गरेको मनकामना स्मार्ट लघुवित्तले कस्तो गर्यो चौथो त्रैमासमा प्रगति?
Aug 05, 2021 11:24 AM
गत सातादेखि दोस्रो बजारमा कारोबार शुरु भएको जीवन विकास लघुवित्तको वित्तीय अवस्था कस्तो?
Aug 05, 2021 08:01 AM
स्वाभिमान लघुवित्तको जगेडा कोष उल्लेख्य बढ्यो, नाफा कति?
Aug 05, 2021 06:35 AM
निर्धन उत्थानको खुद नाफालाई ‘राइट ब्याक’को टेवा
Aug 05, 2021 06:15 AM